ကုလ အပါအ၀င် NGO တွေ ရခိုင် ဒေသ က ထွက် သွား ရေး စစ်တွေ တွင် ဆန္ဒထုတ် ဖော်မည် | Freedom News Group
ကုလ အပါအ၀င် NGO တွေ ရခိုင် ဒေသ က ထွက် သွား ရေး စစ်တွေ တွင် ဆန္ဒထုတ် ဖော်မည်
by FNG on July 9, 2012	ပြီး ခဲ့ တဲ့ လက ရခိုင် ပြည်နယ် မှာ ဖြစ်ပွား ခဲ့ တဲ့ မငြိမ်သက် မှု တွေ အတွင်း သေဆုံး ခဲ့ ရတဲ့
အပြစ်မဲ့ ရခိုင် လူမျိုး တွေ အတွက် ဒီရက်ပိုင်း အတွင်း စစ်တွေ နဲ့ရခိုင် ပြည်နယ် မြောက် ပိုင်း
မြို့တွေ မှာ သာ့သနာ့ အလံ တွေ လွှင့် ထူရင်း အောက်မေ့ ဖွယ် ၀မ်းနည်း ခြင်း အထိမ်း အမှတ်
အခမ်း အနား တွေ ကျင်း ပခဲ့ ကြ ပါတယ်။
ဘာသာရေး အခမ်း အနား တွေ မှာ သုံး တဲ့ သာသနာ့ အလံ တွေ ကို နေအိမ် တွေ မှာ သာ
မက မော်တော်ကား နဲ့ဆိုင်ကယ် ၊ စက်ဘီး တွေ မှာလည်း လွှင့် ထူ ထားကြတယ် လို့ 
စစ်တွေ မြို့က NLD ပါတီ ၀င် တစ်ဦးက FNG ကို ပြောပါတယ်။
မငြိမ် သက် မှု တွေ ဖြစ်ပွား ခဲ့ စဉ် အတွင်း က ရခိုင် ပြည် နယ် မှာ ခေတ္တ လုပ်ငန်း တွေ ရပ် တန့် 
ခဲ့ ရတဲ့ ကုလ သမဂ္ဂ အပါအ၀င် ၊ အစိုးရ မဟုတ် တဲ့ အကူအညီ ပေး ရေး အဖွဲ့အစည်း တွေ ကို
လည်း ပြန်လည် အခြေစိုက် တာ လက်မခံ လို တော့ တဲ့ အကြောင်း ရခိုင် ပြည်သူ တွေ က သတင်း
ဌာ န တွေ ကို ပြောပါတယ်။
စစ်တွေ မြို့ မှာ တော့ နိုင်ငံ ခြား က နေ လာရောက် ဖွင့် လှစ် ထား တဲ့ အကူအညီ ပေး ရေး အဖွဲ့တွေ
ပြန်လည် ရုပ်သိမ်း ရေး အတွက် တောင်း ဆို ဆန္ဒပြ မှု တွေ ကို မကြာခင် လုပ်ဆောင် မယ် လို့စစ်
တွေ မြို့ပေါ် က ဒုက္ခသည် စခန်း တာဝန် ခံ တစ်ဦး က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့ တဲ့ လတွေ က ရခိုင် ပြည် နယ် မှာ မငြိမ် သက် မှု တွေ ဖြစ် ပွား ခဲ့ စဉ် အတွင်း နိုင်ငံ တကာ အကြမ်း
ဖက် အဖွဲ့အစည်း များ နှင့် အဆက် အသွယ် ရှိ သည့် ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက် များ အကူ အညီ ပေးရေး
၀န်ထမ်း အရေခြုံ က ကုလ နှင့် အနောက် တိုင်း NGO ရုံးများ တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့ သည်။
မောင်တော မြို့ နယ် က ဒုက္ခသည် စခန်း တွေ မှာ အကူ အညီ ပေး နေ တဲ့ အလို တော် ပြည့် ကျောင်း
ဆရာ တော် က ” ဒီ NGO တွေ ဟာ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ တွေ ကို ပဲ အကူ အညီ ပေးတာ အခု မှာ ဘယ်
လို အကြံနဲ့လည်း မသိဘူး ရခိုင် တိုင်းရင်းသား တွေ ကို ပါ ကူ ညီ မယ် ဆို ပြီး တစ်ဖက် လှည့် လုပ်
လာ တာ ဒါကြောင့် စခန်း တစ်ခု လုံး က လက်မခံ ဖို့ဆုံး ဖြတ်ထား တယ် လို့ပြောပါတယ်။
စစ်တွေ နဲ့မောင်တော ဒေသ က ရခိုင် ဒုက္ခသည် စခန်း တွေ မှာ ကမ္ဘာ့စားနပ် ရိက္ခာ ဖွံ့ ဖြိုး မှု အစီ
အစဉ် WFP က ကူ ညီ တာ တွေ ကို လက်မခံ တာ တွေ ရှိတယ် လို့အဲဒီ ဒေသ မှာ ရခိုင် တိုင်းရင်း
သား တွေ အတွက် စေတနာ့ ၀န်ထမ်း အကူ အညီ ပေး နေ သူ တစ်ဦး က FNG ကို ပြောပါတယ်။
ဓာတ် ပုံ များ မှာ ကို ဇော်လွင်ဝင်း ရိုက်ကူး ထား သည့် ဓာတ် ပုံ များ ဖြစ် ပြီး ၎င်း ၏ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်
နှာ မှ ရယူ ပါသည်။
From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← ဒု-၀န်ကြီး နေရာ များ အပြောင်းအလဲ လုပ်
မန္တလေး မှာ ရော သတ်သေမှု တွေ များ လာ ပြီးလား →
Htin Moe	#
I am proud of you Rakhine, I fully support Rakhine people.
July 10, 2012	u Thi Ha Tint Swe	#
Could China’s Gas-pipe line support Rakhine national peoples any things? and we think that China’s Gas-pipe line couldn’t support any things but why did you boycott ? and Do you think to be able doing on your reforms with global democratic humantarian supports? and we accepted International democratic patrioticism but not Chavisnism,couldn’t do democratic reforms!
July 10, 2012	ဗိုလ်လူရှုပ်	#
အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်ကြပါ လူများများ ဆန္ဒပြ နိုင်လေ ကောင်းလေပဲ သက်ဆိုင်ရာကလဲ သဘောတုမှာပါ တနိုင်ငံလုံးကထောက်ခံမှာပါ။
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,537,852 hits
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in Englishmyanmar-sea-games-reuters-101213.JPGMyanmar tightens regulations to ensure future investors able to develop DaweiMyanmar beat Timor Leste to record second straight winMalaysian Athletes Get Serious For Glory In Myanmar SEA GamesMyanmar starts biggest SEZ projectMyanmar boleh pintas Malaysia dalam hak asasi manusia, kata SuhakamIron sparks fire at Myanmar beauty spa, blaze kills sevenmyanmar-travel-AFPrelax-101213.jpgWant Burma info in your inbox each morning?